အာဆီယံအဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိများ၏ (၂/၅၃) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် တက်ရောက်ဆွေးနွေး
နေပြည်တော်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ အာဆီယံအဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိဖြစ်သူ ဒေါက်တာဝါဝါမောင်သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြို့၌ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့မှ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသည့် အာဆီယံ အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိများ၏ (၂/၅၃) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ် အစည်းအဝေးများသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့မှ ၈ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် အာဆီယံ အဆင့်မြင့် စီးပွားရေးအရာရှိများ၏ (၂/၅၃) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးဌာန၊ ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. Rath Saravuth က သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ အာဆီယံအဆင့်မြင့် စီးပွားရေးအရာရှိများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Dato Lim Jock Hoi က အဖွင့်မိန့်ခွန်း ပြောကြားရာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသည့်ကမ္ဘာ့စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် အာဆီယံ ၏ စီးပွားရေးကြံ့ကြံ့ခိုင်နိုင်မှု အားကောင်းစေရန်အတွက် အဆင့်မြင့်စီးပွားရေး အရာရှိများ အနေဖြင့် အောက်ပါတို့ကို အလေးထားဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်-
(၁) ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရောဂါကို တုံ့ပြန်ရာတွင် အာဆီယံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုနှင့် မလိုအပ်သော အစီအမံများဖယ်ရှားခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်မည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် ကုန်စည်များစာရင်းများ တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် အာဆီယံကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူစာချုပ် အဆင့်မြှင့်တင်မှု ညှိနှိုင်းမှုများ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်ခိုင်မာစေရန်၊
(၂) အာဆီယံ စီးပွားရေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန် အာဆီယံ ဒစ်ဂျစ်တယ် အသွင်ကူးပြောင်း ရေးအစီအစဉ်ဖြစ်သည့် ဘန်ဒါဆရီ ဘီဂါဝန်လမ်းပြမြေပုံကို အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော်ပြီး အာဆီယံဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးမူဘောင် သဘောတူစာချုပ်ကို ညှိနှိုင်းအတည်ပြုခြင်းဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို အာဆီယံ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်
(၃) အာဆီယံ ပြင်ပကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထပ်မံတိုးမြှင့်ရန်၊ အာဆီယံ-ဩစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုသဘောတူစာချုပ်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအတွက် ညှိနှိုင်းမှုများကို အပြီးသတ်နိုင်ရန်၊ အာဆီယံ-ကနေဒါ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှု သဘောတူစာချုပ်အတွက် ညှိနှိုင်းမှုများ စတင်ရန်နှင့် တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်နှင့် အခြားပြင်ပ မိတ်ဖက် နိုင်ငံများနှင့် အသစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများမြှင့်တင်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အာဆီယံမဟာဗျူဟာကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်။
အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံအဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိများက ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အာဆီယံအဆင့်မြင့် စီးပွားရေးအရာရှိများ၏ (၁/၅၃) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် ကိစ္စရပ်များအပေါ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုများ၊ အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အထူးအစည်း အဝေး၏ရလဒ်များ၊ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ရောက်ရန် တီမောလက်စ်တေနိုင်ငံ၏ အဆိုပြုချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ (၁၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကောင်စီ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးရလဒ်များ၊ အရေးပေါ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ (၈) ကြိမ် မြောက် အာဆီယံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကောင်စီ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေး ရလဒ်များ၊ ပူးတွဲညှိနှိုင်းမှု အစည်းအဝေးရလဒ်များ၊ (၂၈) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံစီးပွားရေး ဝန်ကြီးများ သီးသန့်အစည်းအဝေးရလဒ်များ၊ (၄၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံစီးပွားရေး ပေါင်းစည်းမှု ဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးရလဒ်များ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ တိုးတက်မှု အခြေအနေများအပေါ် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ သည်။
ထို့နောက် အာဆီယံစီးပွားရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်များ၏ အသက်ဝင်မှုအခြေအနေ များ၊ အနာဂတ်တွင်ချုပ်ဆိုမည့် အာဆီယံစီးပွားရေးသဘောတူစာချုပ်များအသက်ဝင်မှု နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင့်လျော်သည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်များချမှတ်ရန်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ၊ (၅၄) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ (၂၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းကောင်စီနှင့် (၄၀) ကြိမ်နှင့် (၄၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေးများအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ၊ အာဆီယံ ကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူစာချုပ် အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းမှုများ၊ အရေးကြီးကုန်စည်များအပေါ် အကောက်ခွန်မဟုတ်သော အစီအမံများ ဖယ်ရှားရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာနှင့် အာဆီယံ စီမံကိန်းအခြေပြု ကနဦးလုပ်ငန်းစဉ်များ စသည်တို့အပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အာဆီယံအဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိများသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ နှင့် ၁၀ ရက်နေ့တို့တွင် ကျင်းပမည့် အာဆီယံပြင်ပ စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည့်နိုင်ငံများ၊ ဆွေးနွေးဘက်နိုင်ငံများနှင့်ကျင်းပမည့် အစည်းအဝေးများအတွက် အကြိုညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးတွင် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က အာဆီယံ ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေး သဘောတူ စာချုပ် (ATISA) အတွက် အတည်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားစာ (IOR) ပေးပို့မှု အခြေအနေ၊ မြန်မာနိုင်ငံက အရေးကြီးကုန်စည်များအတွက် အကောက်ခွန်လိုင်းများ ပေးပို့ထားမှု အခြေအနေ၊ အာဆီယံ-အမေရိကန် TIFA and E3 လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၂၂-၂၀၂၃) အောက်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အကြံပြု ချက်များနှင့် အာဆီယံ-ကိုရီးယား စက်မှုတီထွင်ဆန်းသစ်မှုစင်တာ တည်ထောင်ရေး ဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေတို့ကို ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် (၃၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-အမေရိကန် အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိများ အစည်းအဝေး၊ (၄၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-တရုတ် အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိများ အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ယူကေအဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိများ အစည်းအဝေးနှင့် (၃၆) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ကိုရီးယား အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိများ အစည်းအဝေး တို့ကို လည်းကောင်း၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် (၁၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ကနေဒါ အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိများ အစည်းအဝေး၊ (၄၀) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ဩစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန် အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိများ အစည်းအဝေး၊ (၃၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-အိန္ဒိယ အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိများအစည်းအဝေးနှင့် အာဆီယံ-ဂျပန် အဆင့်မြင့် စီးပွားရေးအရာရှိများ၏ (၁/၂၇) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးတို့ကိုလည်းကောင်း ဆက်လက် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
(၃၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-အမေရိကန် အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိများ အစည်းအဝေး တွင် အဆင့်မြင့်စီးပွားရေး အရာရှိများက ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အာဆီယံ-အမေရိကန် စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ နှင့် မေလတို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် အထူးထိပ်သီး အစည်းအဝေးများ၏ ရလဒ်များအပေါ် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် အင်ဒို-ပစိဖိတ် စီးပွားရေးမူဘောင်၊ အာဆီယံ-အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မူဘောင်အစီအစဉ် (TIFA) နှင့် တိုးချဲ့စီးပွားရေး စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု (E3) လုပ်ငန်းအစီအစဉ်၊ အမေရိကန်၏ နည်းပညာအထောက်အပံ့နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတို့အပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
(၄၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-တရုတ် အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိများ အစည်းအဝေးကို ကျင်းပရာ အာဆီယံ-တရုတ် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ၊ အာဆီယံ-တရုတ် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသအဆင့် မြှင့်တင်ရန်အတွက် ပူးတွဲလေ့လာဆန်းစစ်မှု၏ တိုးတက်မှုများနှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ယူကေ အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိများ အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံ-ယူကေ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (၂၀၂၁-၂၀၂၂) ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၊ အနာဂတ် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် အာဆီယံ-ယူကေဝန်ကြီးများ ပူးတွဲ ကြေညာချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (မူကြမ်း) နှင့် ဒုတိယ အကြိမ် အာဆီယံ-ယူကေ စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြမည့် ကိစ္စရပ်တို့ အပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
(၃၆) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ကိုရီးယား အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိများ အစည်း အဝေးကို ဆက်လက်ကျင်းပရာ အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံ-ကိုရီးယား လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသ သဘောတူစာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ၊ အာဆီယံ-ကိုရီးယား လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသဆိုင်ရာ ပူးတွဲလေ့လာမှု၏ တိုးတက်မှု အခြေအနေ၊ အာဆီယံနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့အကြား ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် ကုန်သွယ်မှု ပြုလုပ်ရန် သုတေသနဆောင်ရွက်မှု၊ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေနှင့် အာဆီယံ-ကိုရီးယားစက်မှုတီထွင် ဆန်းသစ်မှုစင်တာ တည်ထောင်ရေးအတွက် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးရေး စသည့်ကိစ္စရပ်များကို အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
(၁၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ကနေဒါ အဆင့်မြင့် စီးပွားရေးအရာရှိများ အစည်းအဝေးတွင် ပထမအကြိမ် အာဆီယံ-ကနေဒါ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသ ကုန်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းမှု ကော်မတီ အစည်းအဝေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ၊ အာဆီယံ-ကနေဒါ လွတ်လပ် သောကုန်သွယ်မှုဒေသ တည်ထောင်ရေးအတွက် ကုန်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ အပါအဝင် လုပ်ငန်းအဖွဲ့/ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ခွဲ(၁၇) ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန် နှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် စတင်ရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။ ညှိနှိုင်းမှုများတွင် မတူညီ ကွဲပြားနေသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် အခြေအနေများအပေါ် နားလည်မှုမြှင့်တင်ရန်အတွက် Expert Deployment Mechanism – EDM ဆောင်ရွက်ရေးတို့အပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် အဆင့်မြင့် စီးပွားရေးအရာရှိများက အာဆီယံ-ကနေဒါ လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသ ကုန်သွယ်ရေး ညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညွှန်းတမ်းကို အတည်ပြုရန် သဘောတူခဲ့သည်။
(၄၀) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ဩစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန် အဆင့်မြင့် စီးပွားရေးအရာရှိများ အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံ-ဩစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှု သဘောတူစာချုပ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းမှု အခြေအနေများ၏ တိုးတက်မှုအား မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး ရှေ့ဆက် ဆောင်ရွက်သွားမည့် ညှိနှိုင်းမှုများနှင့် အာဆီယံ-ဩစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသ အကောင်အထည်ဖော်မှု အထောက်အပံ့ပေးရေးအစီအစဉ်တို့ကို ဆွေးနွေး ခဲ့သည်။
(၃၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-အိန္ဒိယ အဆင့်မြင့် စီးပွားရေးအရာရှိများ အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံ-အိန္ဒိယ ကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူ စာချုပ်အား ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် အတွက် နယ်ပယ်များသတ်မှတ်သည့် စာတမ်းကိုအတည်ပြုရန် ပြည်တွင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း များ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ၊ အဆိုပါ စာတမ်းကို အတည်ပြုနိုင်ရေးနှင့် အာဆီယံ-အိန္ဒိယ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသ ပူးတွဲကော်မတီ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စတို့အပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
အာဆီယံ-ဂျပန် အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိများ၏ (၁/၂၇) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ဆက်လက် ကျင်းပရာ အာဆီယံ-ဂျပန် ဘက်စုံ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူ စာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ၊ အာဆီယံနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့ အကြား ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများနှင့် (၂၈) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ဂျပန် စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး ကျင်းပရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု တို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အစည်းအဝေးများတွင် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က မြန်မာနိုင်ငံက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ သည့် အခြေအနေများနှင့် ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စရပ်များ၊ ဒေသတွင်း စီးပွားရေး ပေါင်းစည်းမှုတွင် အာဆီယံ၏အချက်အခြာကျမှုကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေး၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တိုင်း ပါဝင်မှုရှိစေရေးနှင့် အာဆီယံဒေသတွင်းနှင့် အာဆီယံနှင့် ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများ အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် မည်သည့်နိုင်ငံကိုမျှ ချန်ထားခဲ့ခြင်း မရှိစေရေး တို့ကို အလေးပေး ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးသို့ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့်အတူ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် အာဆီယံဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ရုံးမှ စီးပွားရေးအရာရှိတို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။